Wasiirka waxbarashada oo hambalyo u diray macalimiinta Soomaaliyeed – Radio Muqdisho
Wasiirka waxbarashada oo hambalyo u diray macalimiinta Soomaaliyeed
Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Soomaaliya Mudane Dr. Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo la hadlay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA ayaa wuxuu ka hadlay Maalinta Macalinka Aduunka oo maanta oo kale Sanad kasta loo dabaal dago.
Dr. Cabdulqaadir Cabdi Xaashi ayaa wuxuu hambalyo u diray dhamaan macalimiinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan, iyaga iyo Caruurtooda, wuxuuna u rajeeyay Guul.
“Waxaan Hambalyo u dirayaa dhamaan macalimiinta Soomaaliyeed waxaana u rajaynayaa in Barwaaqo iyo Horumar sanadkaan kiisa kale Alle uu ku gaarsiiyo.”Sidaasi waxaa yiri Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya.
Ugu danbayntii Dr. Cabdulqaadir ayaa sheegay in macalimiinta Soomaaliyeed ay yihiin Geesiyaal u taagan sidii dadka Soomaaliyeed ay uga saari lahaayeen Jahliga oo ay u noqon lahaayeen dad tacaliin leh.
Dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixisay dhinaca waxbarashada, waxaana haatan shaqaynaysa Jamacadda Umadda Soomaaliyeed oo ay wax ka bartaan kumaam Arday Soomaaliyeed ah.
Deeq lacageed oo ka timid Madaxweynaha Jabuuti oo la guddoonsiiyay Wasaaradda Arrimaha gudaha
Qalab caafimaad oo lagu wareejiyay isbitaalka Forlanini+Sawirro